ပြောင်းပြန်ရေပုံးရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် ပြောင်းပြန်ရေပုံးရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
HUAI-AN HARDWARE CO., LTD. ဦးဆောင်သည် Taiwan ၏ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ ပြောင်းပြန်ရေပုံးရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက်။ ကျနော်တို့အရွယ်အစားနှင့်ဖောက်သည် '' အတိအကျလိုအပ်ချက်များကိုနှုန်းအဖြစ်စိတ်ကြိုက်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်အတွက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ gradations နှင့်အတူထိုထုတ်ကုန်ပေးစွမ်းပါသည်။ ကျနော်တို့အရွယ်အစားနှင့်ဖောက်သည် '' အတိအကျလိုအပ်ချက်များကိုနှုန်းအဖြစ်စိတ်ကြိုက်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်အတွက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ gradations နှင့်အတူထိုထုတ်ကုန်ပေးစွမ်းပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တတ်နိုင်သောဈေးနှုန်းများမှာငါတို့မှအဲဒီအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များပေးသော်လည်းကိုယ်နိုင်ပါတယ်။
ပုံစံ - CAST STEEL No. 680 ~ 686F SERIES
DSC CAST သံမဏိ BUCKET Steam ထောင်ချောက်
●MOP 41K x ကို 345̊ဂ.
●DSC CASTLE သံမဏိပါ ၀ င်သောခုံးတံဆိပ်ပါသောသမရိုးကျအစဉ်အလာမရှိသောယန္တရားနှင့်မူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ခလုတ်အားရေနှင့်တူသောစုပ်ယူမှုကိုတားဆီးနိုင်ပြီးအရှုံးကိုတားဆီးနိုင်သည်.တစ်မူထူးခြားသောပေါင်းစပ်မှုများသည် DSC ၀ င်ငွေခွက်ပါသောရေနွေးငွေ့ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနှစ်များတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောအချိန်နှင့်လည်ပတ်မှုပြည့်စုံချိန်တွင်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုဖြစ်စေသည်။.
●DIRT နှင့် PURGE SYSTEM ကိုကိုင်တွယ်ရန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းရည်
●လေပူအပူချိန်မှာလေနှင့် CO2 ထုတ်ပေး.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.steamtraps.com.tw/my/inverted-bucket-steam-trap-2.html
အကောင်းဆုံး ပြောင်းပြန်ရေပုံးရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် ပြောင်းပြန်ရေပုံးရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ ပြောင်းပြန်ရေပုံးရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan